Wɔahyehyɛ Bere a Yɛbɛwu Ato Hɔ Anaa? | Bible Nsɛmmisa
KENKAN WƆ Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndau Norwegian Nzema Ossetian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Dabi. Wɔnhyehyɛɛ bere a yɛbɛwu ntoo hɔ. Bible nka biribiara a ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ nkrabea bi a wɔahyehyɛ ato hɔ ama yɛn. Mmom, ɛma yɛhu sɛ nnipa pii wɔ hɔ a nea enti a wɔwu ne sɛ “asiane to wɔn nyinaa bere a wɔnhwɛ kwan.”—Ɔsɛnkafo 9:11.
Ɛnyɛ Bible no ara na ɛka sɛ “owu wɔ ne bere”?
Ampa, Ɔsɛnkafo 3:2 ka sɛ, “Awo wɔ ne bere, na owu wɔ ne bere; ɔtɛw wɔ ne bere, na nea wɔatɛw no tutu wɔ ne bere.” (Akuapem Twi Bible) Nanso, sɛ wokenkan nsɛm a ɛdi Ɔsɛnkafo 3:2 anim, ne nea ɛdi akyi a, wobɛhu sɛ nea Bible reka ho asɛm wɔ hɔ ne nneɛma a ɛsisi wɔ yɛn daa daa asetena mu. (Ɔsɛnkafo 3:1-8) Onyankopɔn nhyɛ okuafo biara sɛ ɔnnua ade wɔ bere pɔtee bi mu, na saa ara na ɔnhyɛɛ bere a yɛn mu biara bewu ntoo hɔ. Mmom, nea na Bible reka ho asɛm wɔ ha ne sɛ, ɛnsɛ sɛ yɛma nneɛma a yɛyɛ no daa daa no gye yɛn adwene ma yɛn werɛ fi yɛn Bɔfo no.—Ɔsɛnkafo 3:11; 12:1, 13.
Yɛbɛtumi ama yɛn nkwa nna aware
Ɛwom, nneɛma a yɛnhwɛ kwan tumi sisi, nanso sɛ yɛsisi gyinae pa a, yɛtumi nyin kyɛ. Bible ka sɛ: “Onyansafo mmara yɛ nkwa asuti, ɛdan onipa fi owu mfiri ho.” (Mmebusɛm 13:14) Mose nso ka kyerɛɛ Israelfo sɛ, sɛ wɔdi Onyankopɔn ahyɛde so a, wɔn ‘nna bɛware.’ (Deuteronomium 6:2) Nanso sɛ yɛyɛ nneɛma bɔne anaa yɛdi nsɛnhunu a, yɛbɛtumi atwa yɛn nkwa nna so, na yɛawu ntɛm.—Ɔsɛnkafo 7:17.
Ɛwom, yɛbɛtumi ahwɛ yɛn ho yiye, nanso, yɛyɛ dɛn ara a, yɛbɛwu. (Romafo 5:12) Ɛno nkyerɛ sɛ saa na ɛbɛkɔ so bere nyinaa. Bible hyɛ bɔ sɛ ebedu bere bi na “owu nni hɔ bio.”—Adiyisɛm 21:4.